ngomphathi ku 19-12-10
Ukulala ebusuku kuvule ukukhanya okuncinci kobusuku, unobungozi emntwaneni?
ngomphathi ku 19-11-27
Amaxesha ngamaxesha, kuye kuxelwe kwi-Intanethi ukuba ukutya ukutya kwe-XX kungakhokelela ekufikiseni kwangethuba, nto leyo ebangela ukuba wonke umzali akhathazeke ngokutya kwabantwana. Ngoku, abanye abantu bathi izibane ezincinci zasebusuku zinokwenza ukuba abantwana kunye nabantwana bakhule kwangethuba, nto leyo ebangela ukuba oomama bakhathazeke kakhulu. A ...
Ezi zinto zasibhozo zasekhitshini kufuneka zitshintshwe minyaka le!
ngomphathi ku 19-11-04
1) Isipuni selayisi somthi okanye icephe - kulula ukufuya iintsholongwane 2) Ifosholo eplastikini okanye ngomthi - nangona kulula ukuyisebenzisa kodwa kulula ukuzala intsholongwane 3) Ibrashi yesosi yesosi yindawo yokutshiza yebhaktiriya, kwaye itshintshwa ngokukhawuleza ibe yi-silica gel. 4) I-wiper wiper akufuneki ihlukaniswe kuphela ...
Iingcebiso ngokuKhathalela izilwanyana
ngomphathi ku 19-10-28
Uninzi lwabanini bezilwanyana zasekhaya, ngaphandle kolwazi lobungcali lokhathalelo lwezilwanyana, zihlala zilahleka xa izinja zazo zigula. Ukuthintela le meko, abanini bezinja kufuneka bafunde okuthile malunga nokhathalelo lwezinja zabo xa zigula, ukuze bakhathalele inja yethu ethandekayo kwaye baqinisekise ukukhula kwayo okunempilo ...
Wamkelekile ukuba usityelele kwi-126th Canton Fair!
ngomphathi ku 19-10-21
Wamkelekile ukuba usityelele kwi-126th Canton fair phrase 2, ukusuka nge-23 ukuya kwi-Okthobha yama-24, umnquba wethu ngu-16.4 K16. Silindele wena!
Funda Malunga Press ekubumbeni
Cinezela yokubumba: ubukhulu becala esetyenziselwa thermosetting zeplastiki sukube, ngokutsho kweempawu bokwakha izinto kunye nezixhobo processing kunye nobuchwepheshe, cinezela yokubumba zingahlulwahlulwa ekubumbeni kunye wokulaminetha. 1.Ukubumba Ukucinezela ukubumba, okwaziwa ngokuba kukucinezela ukubumba, yeyona nto iphambili ...
Funda malunga neCalendering (iphepha, ifilimu)
Calendering: inkqubo apho izinto zeplastiki zidityaniswe kwifilimu okanye kwiphepha ngothotho lwezinto ezifudumeleyo eziphantsi kwesenzo sokukhupha nokwandiswa. Inkqubo: Izinto eziluncedo: umgangatho wemveliso elungileyo, amandla emveliso emikhulu, inokuzenzekelayo imveliso eqhubekayo; Ukungancedi: enkulu ...
Funda malunga ne-extrusion Molding (iprofayili)
ngomphathi ku 19-08-28
Inkqubo yokubumba i-extrusion: eyaziwa ngokuba yi-extrusion molding, efanelekileyo ngokufanelekileyo ekubunjweni kwe-thermoplastic, nayo ifanelekile kwinxalenye yokuhamba kwe-thermosetting efanelekileyo kunye nokuqiniswa kweplastiki. funa ...
Funda malunga neBlow Molding
ngomphathi ku 19-08-27
Ukuvuthela ukubumba: kukukhupha izinto ezinyibilikisiweyo ze-thermoplastic kwi-extruder, uyibambe kwisikhunta, emva koko uvuthele umoya kuloo nto, izinto ezinyibilikisiweyo ziyanda phantsi kwesenzo soxinzelelo lomoya, zilungele udonga lwesikhunta, kwaye ekugqibeleni zipholise nokunyanga okufunekayo ...
izimvi DB ibhegi ezivenkileni , opinki DB ibhegi ezivenkileni , ibhegi yokuthenga, PU shopping bag , ibhegi emhlophe DB ezivenkileni , ibhegi yemihla ngemihla,